Diyaarad lagu soo riday Liibiya, iyo Sarkaal sare oo lagu dilay Yaman. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Diyaarad lagu soo riday Liibiya, iyo Sarkaal sare oo lagu dilay Yaman.
On Jul 30, 2017 303 0
Ciidamada Golaha Shuurada Mujaahidiinta Darna ee dalka Liibiya ayaa ku guuleystay iney dhulka soo dhigaan diyaarad dagaal oo uu lahaa dagaal Ooge Xaftar, ee gumaadka iyo burburinta ka wada dalka muslimka ah ee Liibiya.
Diyaaradan oo qorsheyneysay iney duqeyn cadowtooyo ka fuliso magaalada Darna ayaa waxaa haleelay hubka lidka Diyaaradaha oo ay adeegsadeen ciidamada Mujaahidiinta, waxaana ay kusoo dhacday nawaaxiga magalada Darna.
War kasoo baxay Mujaahidiinta Darna waxay ku sheegeen iney qabteen caawiyihii Bilotka diyaaradda isagoo nool, ayna ku daba joogaan Bilotka qudhiisa oo la rumeysanyahay inuu Baalshuut kusoo degay islamarkaana uu noolyahay.
Diyaaradda ay Mujaahidiintu soo rideen waxaa nooceeda lagu sheegay Miig 23, waxaana adeegsanayay dagaal Oogaha Reer galbeedku taageersan yihiin ee Xaftar kaas oo sanado xiriir ah gumaad ka wada dalka Liibiya.
Magaalada Darna ayaa ku jirta go’doon adag oo ay kusoo rogeen malleeshiyaadka Xaftar, mana jirto magaalada wax gudaha u gala ama kasoo baxa, waxaana dadka qaar ay ka cabsanayaan iney la kulanto wixii soo maray magaalada Banqaazi oo kale taas oo sanado go’doon ah kadib gacanta u gashey malleeshiyaadka Xaftar.
Dhanka kale dalka Yaman, rag katirsan Mujaahidiinta Ansaaru Shareeca ayaa toogtay sarkaal sare oo katirsan malleeshiyaadka Imaaraatka iyo Maraykanka kala shaqeeyo dagaalka ka dhanka ah Mujaahidiinta.
Sarkaalka la dilay waxaa lagu magacaabaa Korneel Naasir Saalax Al-Jacfari, wuxuuna horey uga mid ahaa saraakiisha Lijaanta shacbiga waxa loogu yeero ee Cabdi Rabbi Haadi Mansuur la shaqeyneysay, hadana wuxuu ahaa sarkaal katirsan malleeshiyaadka Xizaamul Amniga, wuxuuna madax ka ahaa bar kontorool oo lagu magacaabo Cakdaa oo ku taalla magaalada Lowdar ee gobolka Abyan.
Waxaa la dilay Sarkaalkan duhurnimadii shalay, waxaana mas’uuliyadda dilkiisa sheegtay mujaahidiinta Ansaaru Shareeca ee dalka Yaman.